Fitaovana marketing amin'ny mailaka 3 tokony ho fantatrao momba. Martech Zone
Alatsinainy, 11 Jona, 2012 Alakamisy, Jolay 10, 2014 Tempolin'i Lavon
Lahatsoratra handefasana - Raha miara-miasa amin'ny masoivohon'ny marketing amin'ny mailaka ianao dia mety efa nifandray tamin'ny mpiara-miasa izay manolotra ny lahatsoratra hisoratra anarana izy ireo. Text to Subscribe dia fitaovana marketing amin'ny mailaka tsara. Fomba entina manondrotra ny lisitry ny marketing amin'ny mailakao io. Ireo mpivarotra mailakao dia mandany fotoana hametrahana an'io, rehefa mipetraka ianao ary mijery azy io. Miaraka amin'ny ezaka kely dia ho hitanao fa mora ny olona afaka mandefa hafatra mba hisoratra anarana handraisana ny mailakao.
Email mialoha ny mpanjifa - Litmus ary Email amin'ny Acid. Ny orinasam-barotra mailaka tsara dia hilaza aminao fa mila manandrana ny mailaka alohan'ny handefasana. Ireo fitaovana marketing amin'ny mailaka roa ireo dia manampy anao hanao izany mora sy tsy misy ezaka. Azonao atao ny mampiditra ny mailakao ary hampiseho aminao ny fomba fandefasana izany amin'ny mpizaha isan-karazany sy amin'ny finday samihafa. Tsara ny manampy azy ireo hahazoana antoka fa izay rehetra mahazo ny fampielezan-kevitra amin'ny mailakao dia mahazo ny endriny MAHAY indrindra.
Fitsapana ny lohahevitra. Mora ny manoratra andalana lohahevitra. Sarotra ny mamorona andalana foto-kevitra lehibe. Miara-miasa amin'ireo fitaovana marketing amin'ny mailaka ireo: Litmus (indray!) dia azonao antoka fa eo amin'ny lala-mahitsy ianao. Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny andalana ny foto-kevitrao amin'ireto fitaovana ireto dia afaka mahazo valiny ianao momba izay mandeha na tsia. Raha vantany vao hitanao ny zavatra tsy mandeha, aza misalasala manova azy, mametaka azy ary manandrama indray. Mety ho afaka mampiasa Twitter koa ianao hizaha ny andalana ny lohahevitra. Soraty amin'ny kinova roa izay eritreretinao hampiasaina, ampifandraiso amin'ny atiny sasany, ary jereo hoe inona ny valinteny azonao amin'ny iray mifanohitra amin'ny iray hafa.
Ary, mazava ho azy, raha miara-miasa amin'ny masoivohon'ny varotra mailaka ianao dia afaka manampy izy ireo hahafantatra fa mahafantatra ireo fitaovana samihafa ireo ianao mba hahatonga ny paikadin'ny mailaka sy ny fampielezana mailaka araka izay tratrany. Zava-dehibe ny fananana paikady marketing amin'ny mailaka ary aza manaparitaka mailaka amin'ny mpamandrika. Raha mbola tsy manana paikady ianao dia mety te hiara-miasa amin'ireo mpanolo-tsaina amin'ny marketing mailaka hananganana fototra mafy orina.
Tags: fifandraisanamailaka Marketingmailaka amin'ny asidralitmusmpandinika andalana lohahevitralahatsoratra hisoratra anarana